Ekpere ịgwọ ọrịa iji nwetaghachi ahụike gị ngwa ngwa. ?
Ekpere na-agwọ iji wepụta ahụ ike gị ọsọsọỌ bịara iji zụkọta ọgwụ ụmụ nwoke. Site n’ikpe ekpere, mkpa gị ga-esikwu ike n’ebe Chineke nọ, onye ga-achọta ụzọ kacha mma ọ ga-esi gwọọ gị.
Ọgwụ a nwere ike ịpụta na dọkịta na-aka mma, dịka ọmụmaatụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwere ike ibilite site na nchọpụta nke ọgwụgwọ ma ọ bụ ọgwụ ọhụụ. Ọrịa nwere ike ibute ọrụ ebube.
Agbanyeghị, iji mee nke a, ọ dị mkpa iji ike gị niile jiri ekpere na-agwọ ọrịa ma guzosie ike mgbe niile n'okwukwe ị nwere ike isi n'ọnọdụ a pụọ. Nchekwube bụ ihe kachasị mma megide ọrịa ọ bụla.
1 Ekpere na-agwọ iji wepụta ahụ ike gị ọsọsọ
2 Ekpere maka ahuike
3 Ekpere Nri Oria
4 Ike ekpere
5 Ekpere maka ahuike mmadu.
6 EKPERE MAKA CHUKWU OKWU NIILE MAKA CHUKWU OKWU NIILE
7 Ekpere diri Nwaanyị nke Fatima ịrịọ maka ahụ ike.
8 Mkpa ekpere na-agwọ ọrịa
Ọ bụ ezie na ndị dọkịta ekwuola ụzọ maka ohere dị iche iche ọgwụgwọ, Ọ dịghị ihe agaghị ekwe omume maka Chineke.
Site n’ekpere na-agwọ ọrịa ị nwere ike rụọ ọrụ ebube gị ma wepu ọrịa nke na-eme ka ị taa ahụhụ nke ukwuu.
Na mgbakwunye na Abụ Ọma nke 133 na Archaeel Raphael ekpere, nke anyị gosipụtara ugbu a, enwere ndị ọzọ ike ekpere nke ịgwọ ọrịa. Leda anya.
Ekpere maka ahuike
“Nna m ukwu, ị bụ dibịa Chineke. Na-enye ndụ na ndụ nye ndị na-achọ gị.
Ọ bụ ya mere taa, Onyenwe anyị, n’ụzọ pụrụ iche, achọrọ m ịrịọ maka ọgwụgwọ nke ụdị ọrịa niile, ọkachasị ndị na-emekpa m oge a.
Ama m na ị chọghị ihe ọjọọ, ịchọghị ọrịa nke enweghị ahụike, n'ihi na ị bụ Onye Kachasị Elu.
Mee m ọgwụgwọ ime mmụọ miri emi, ọ bụrụ na ịchọrọ, ọ bụrụ ọgwụgwọ anụ ahụ.
Ka eme ya nke oma site na idi ike nke Mmuo Nso gi ma obu site na dibia na ogwu!
Mee ka okwukwe m bawanye n’ike Gị, Onye-nwe-anyị, na Lovehụnanya infinito na i nwere maka m. Mee ka okwukwe m dịkwuo ukwuu, Onyenwe anyị, nke na-esighi ike mgbe ụfọdụ.
Ekwere m na ike ịgwọ ọrịa gị, Chineke m, m ji obi umeala na-ekele gị maka ọrụ niile ị na-arụ n’obi m na ahụ m ugbu a. Amen, ka ọ dị!
Ekpere Nri Oria
“Onyenwe m, nye m ahụ m ike, m ga - ejikwa ndụ ịdọ aka ná ntị mee ka m ruo eruo maka enyemaka gị.
Onye-nwe, maka ịkwanyere gị ugwu na ịgwa gị ekele na otuto, otu ị si mee ka ị baa ọgaranya, n’enyeghị m ohere ịchọrọ, were okpueze buru ibu na-agacha njem na-anaghị adị mfe.
Mgbe m kelere gị maka ụdị obi ọma a, ana m ekele gị, Onyenwe anyị, ọbụghị naanị n'okwu ọnụ, kama nke kachasị na ndụ nke ịdị nsọ.
Gị onye na-ata ndị ị hụrụ n’anya ahụhụ, dịka nna nke na-ata nwa nwoke na-enupụ isi ahụhụ, onye ọ na-elekọtara, ana m ekele gị maka oge niile m tara ahụhụ mgbe m hụrụ na aka gị adakwasị m, mana ebere jupụtara mgbe niile.
Nna m gụrụ m ihe m mụtara n’aka gị, nna m!
Onweghị ihe ga-ekwekọ n'ịhụnanya gị.
Ejiri otutu okwu kwue okporo ụzọ ha, ma ọ bụ naanị ndị na-eje ije na ya ga-enwe obi ụtọ pụrụ iche. ”
“Onyenwe anyị Jizọs, echere m na ị bilitere ma dị ndụ. Echere m na ị nọ na Sakrament nke ebe ịchụàjà inye m nri; Echere m na ị zara ekpere nke ndị niile ji obi gị chọọ. Ana m asọpụrụ gị ma na-eto gị. Ekele m gị, Onye-nwe, maka ị bịara ịhụ mmadụ n’anya.
Onweghi onye echefuru gi, I bu ihe zuru oke na ndu m, nihi na a gbaghara anyi, site n’enyemaka gi agam eleta udo na ahu ike. I jiri ike gị mee ka m dị ọhụrụ. Gọziem ihe niile dị m mkpa ma meere m ebere.
Gwọọ m, Onyenwe anyị Jizọs. Gwọọ mmụọ m, mmeri n'ebe mmehie dị. Gwọọ mmetụta uche m, mechie ọnya nke m merụrụ, ịkpọasị, nkụda mmụọ ma ọ bụ iwe.
Na-agwọ ahụ m, na-enye m ahụ ike.
Taa, onyenwe m, a na m ewetara gị ọrịa ndị a na - arịa: (kwupụta ọrịa gị n’olu dara ụda) m na - arịọ gị ka inwere onwe gị kpamkpam, dịka ndị chọrọ gị mgbe ị nọ n’ụwa anyị.
Ekwenyere m na Okwu ahụ kwere nkwa: Ya onwe ya buuru mmehie anyị n’arụ anyị n’elu osisi, ka anyị wee nwụọ na mmehie ma bie ndụ. Ikpe Ziri Ezi; site na ọnya gị ka ejiri gwọọ gị. '(1 Pdr 2,24).
Ekwere m ntụkwasị obi na ị hụrụ m n'anya, ọ bụrụgodi nsonaazụ m na-arịọ, ejiri okwukwe m gosi m: Ekele, Onyenwe anyị Jizọs, maka ngọzi ị na-awụkwasị m. ”
Ekpere maka ahuike mmadu.
“Onyenwe eluigwe na ụwa, Onye kere ihe niile.
Abia m n’ebe ọnụnọ gị dị ugbu a ịrịọ maka enyemaka n’aka ndị na-arịa ọrịa ma ọ bụ ndị nwere nsogbu uche.
Anyị maara na site n’ọrịa, anyị nwere ike inwe oge nchegharị, nke na-enyere anyị aka nke ọma, mee ka anyị bịaruo gị nso, n’ụzọ nke ịgbachi nkịtị.
Ma anyị na-arịọ maka ebere ya ma rịọ ya: setịpụ aka gị nke ọma ka ndị ọrịa, ndị na-arịa ihe mgbu, amaghị ihe na adịghị ike.
Kwee ka okwukwe na ntụkwasị obi sie ike n’ime obi gị. Ọ na -eme ka ihe mgbu ma na-eme ka ha nwee udo na ịnọ jụụ.
Gwọọ nkpuru obi ha inye aka nyeghachi aru ha.
Nye ha nkasi obi, ahụ efe ma gbanye ọkụ nke olileanya n’ime obi ha ka ọ bụrụ na, site na nkwado nke olile anya na okwukwe, ha ga - enwe ihunanya nke eluigwe na ụwa.
Ka udo diri anyi nile.
EKPERE MAKA CHUKWU OKWU NIILE MAKA CHUKWU OKWU NIILE
«S. Raphael, onye aha ya pụtara "dibịa nke Chukwu," gị, onye e boro ebubo na o soro nwa okorobịa Tobias na njem ya n'ala Medes, onye na nloghachi ya gwọrọ ìsì nna Tobias.
Saint Raphael, Gi onye nyeere Tobias nna aka ma mee ka ochicho ya na ochicho ya mezuo, anyi na ario gi ma juo enyemaka gi.
Buru onye nche n’iru Chineke, nihi na oburu onye dibia obi oma nke n’eziga onye kwesiri ntukwasi obi.
S. Rafael, gwọọ m ọrịa ọ bụla.
Mee ka m nwee ahụ ike mgbe niile, n’ihi na anyị agaghị akwụsị ịnapụta gị. Daalụ
Kpee ekpere Nna Anyị nke Bi n’igwe, Kedokwa Ekele.
Ekpere diri Nwaanyị nke Fatima ịrịọ maka ahụ ike.
“Nwanyị nwanyị Fatima, nne m hụrụ n'anya nke ndị niile na-ata ahụhụ na anụ ahụ na mkpụrụ obi.
Lekọta ahụike ụmụ gị, bepụ mgbu na ihe mgbu na-emekpa anyị ahụ, na-elelị ma na-eme ka ike gwụ anyị.
Rịọ Ọkpara gị ị hụrụ n'anya nke gwọworo ọtụtụ ndị ọrịa n'ụzọ nke oge ya, ka o nwe anyị ọmịiko, ka ọ bụrụ ike anyị. Ka ahụhụ anyị dịrị ya. Ka Chukwu nye anyị ahụ ike iji jeere Ya ozi oge niile, ilekọta ibe anyị. Mana karisia ihe niile, ka eme uche Chineke Nna, Onye n’elebere anyi anya na ihunanya na-enweghi ngwụcha na obi ọmịiko na-enweghị atụ. Were nne anyi, k'anyi jiri Jisos.
Mkpa ekpere na-agwọ ọrịa
Mgbe anyị na-arịa ọrịa, ma ànyị nwere anụ ahụ, na mmụọ ma ọ bụ n'uche, anyị na-enwe nkụda mmụọ. Ihe mgbu a na-emetụtakwa anyị mgbe enwere onye anyị hụrụ n'anya nwere nsogbu ahụike. N’oge ndị ahụ, ịmara na anyị nwere onye anyị ga-agakwuru ga-eme ka obi ruo anyị ala.
Chineke anaghị ahapụ ụmụ ya. Ya mere, mkpa ọ dị Ekpere na-agwọ ọrịa bụ na ọ na-akasi anyị obi. Ekpere a na-eweta udo na olile anya n’oge ndị a siri ike.
Ọtụtụ oge anyị na-ahụ onwe anyị n’ihu Chineke n’amaghị otu esi arịọ maka ọgwụgwọ anyị, asụsụ a ga-eji. Ekpere na-agwọ ọrịa na-eweta okwu ziri ezi nke, ọ bụrụ na ejiri okwukwe kwụọ ya, ga-enwe nnukwu ike ịgwọ anyị.
Nwee obi ụtọ ịbụ onye e mikpuru n’ime ekpere nke ịgwọ ahụ ka ị gaghachi ike gị ọsọ ọsọ wee mụtakwuo ụdị ụdị atọ nke dị.